Nalalaka ny Asa Fitoriana, Repoblika Dominikanina | Diary 2015
Nisy namono i Trujillo
Nihamaro ny firenena nanakiana ny fitondrana jadon’i Trujillo, tamin’ny 1960. Nitombo koa ny mpanohitra avy teto an-toerana. Tsy nilamina mihitsy àry ny toe-draharaha politika. Mbola tonga ihany anefa i Milton Henschel, avy any amin’ny foibe, tamin’ny Janoary 1961, mba hanatrika fivoriambe telo andro. Nisy 957 no nanatrika ny lahateny ho an’ny besinimaro, ary 27 no natao batisa. Nampian’ny Rahalahy Henschel koa ireo rahalahy mba handamina ny asa sy hanamboatra ny sarin’ny faritany.
Notendrena hitsidika fiangonana i Enrique Glass sy Julián López, izay samy mpiandraikitra ny faritra. Hoy i Julián: “Fiangonana roa tany amin’ny faritra atsinanana no notsidihiko, niampy an’ireo fiangonana rehetra tany avaratra. I Enrique kosa nitsidika an’izay fiangonana tsy notsidihiko tany atsinanana sy ny fiangonana rehetra tany atsimo.” Afaka nifandray tamin’ny fandaminana indray ny fiangonana noho ireny fitsidihana ireny. Nanatanjaka ny finoan’izy ireo koa izany.
Salvino sy Helen Ferrari, ho eto amin’ny Repoblika Dominikanina, 1961
Tonga i Salvino sy Helen Ferrari tamin’ny 1961. Nahazo diplaoma tamin’ny Sekolin’i Gileada, kilasy faharoa, izy ireo. Efa misionera tany Cuba izy ireo, ary tena nilaina teto ny traikefa azony tany. Efa masaka hojinjaina mantsy ny vokatra teto. Lasa Komitin’ny Sampana i Salvino, ary izany foana izy mandra-pahafatiny tamin’ny 1997. I Helen indray nanompo manontolo andro nandritra ny 79 taona, ary misionera izy tamin’ny ankamaroan’ireo fotoana ireo.
Tena nampihorohoro ny fitondran’i Trujillo. Nifarana ihany anefa izany, tsy ela taorian’ny nahatongavan-dry Ferrari, fa tamin’ny fomba nahatsiravina. Nisy nanao tifitra variraraka ny fiara nitondra an’i Trujillo, ny alin’ny 30 Mey 1961. Indrisy anefa fa mbola nitohy ihany ny olana ara-politika sy ny ady an-trano, nandritra ny taona maro.
Nandroso foana ny asa fitoriana
Mbola nisy misionera hafa koa tonga. Tsy iza izany fa i William Dingman, izay nanao Sekolin’i Gileada, kilasy voalohany, sy Estelle vadiny, ary Thelma Critz sy Flossie Coroneos. Samy nanompo tany amin’ny sampan’i Porto Rico izy ireo no nafindra teto, roa andro monja taorian’ny nahafatesan’i Trujillo. Hoy i William: “Tsy nilamina mihitsy ny tany tamin’izahay tonga teto, ary niasa be ny miaramila. Natahorana hisy tolom-bahoaka tamin’izay, ka nosavan’izy ireo daholo ny olona teny an’arabe. Imbetsaka izahay no nosakanana teny amin’ny toeram-pisavana, ary nosavana ny entanay. Navoaka daholo ny tao anatin’ny valizinay, hatramin’ny zavatra madinika indrindra.” Nanahirana mihitsy ny nitory tamin’izany.
Thelma Critz ary Estelle sy William Dingman. Mbola eto izy ireo izao, ary efa misionera nandritra ny 67 taona
Hoy ihany i William: “Nolazaina tamin’ny vahoaka, nandritra ny fitondrana jadon’i Trujillo, fa Kominista ny Vavolombelon’i Jehovah, ary tena faikan’olona. ... Vitanay ihany anefa ny nanaporofo hoe tsy marina izany.” Nihamaro ny olona nanaiky ny vaovao tsara rehefa nitohy indray ny asa. Nisy 33 ny mpisava lalana manokana teto, tamin’ny faramparan’ny taom-panompoana 1961.